Shiinaha Silicon Carbide SIC Soo-saare iyo Soo-saare | Anteli
1.Soosaarka oo faahfaahsan
The carbide silicon crystal madow leh cufnaanta sare soo saaray warshaddeenna waxaa laga sameeyey ciid quartz nadiif ah sare iyo coke batroolka. Wax soo saarka ayaa lagu dhalaalay iyada oo loo marayo heerkulka sare illaa 2500C foornada elektaroonigga ah. Wax soo saarku waxay leeyihiin adkeyn sare adkeysi wanaagsan oo kuleylka leh oo iska caabiya, iska caabinta shucaaca, caabbinta shoogga kuleylka, iyo korantada iyo kuleylka wanaagsan, waxaana si ballaaran loogu adeegsadaa injineernimada, kiimikada, elektarooniga, warshadaha metallurgy iyo difaaca. Shirkadeena waxay soo saari kartaa cabirro kala duwan oo carbide silicon ah, sida ku cad heerarka qaranka iyo kuwa caalamiga ah ee GB, ISO, ANSI, FEPA, JIS, iwm.
Carbide Silicon (SiC), oo sidoo kale loo yaqaan carborundum, waa isku-darka silikoon iyo kaarboon leh caanaha kiimikada ee SiC. Waxay ku dhacdaa dabeecadda sida moissanite aad u dhif ah. Budada silikoonka carbide-ka ayaa si ballaaran loo soo saaray illaa 1893 si loogu isticmaalo sidii loo xoqin lahaa. Midhaha carbide-ka silikoonku waa lagu wada xiri karaa iyadoo la kala sifeynayo si loo sameeyo dhoobada aad u adag oo si ballaaran loogu adeegsado codsiyada u baahan adkeysi sare, sida bareegyada baabuurta, xajinta gaariga iyo taarikada dhoobada ee jaakadaha xabbadda celisa. Codsiyada elektarooniga ah ee carbide-ka silikooniga ah sida diod-soo-saarka iftiinka (LED-yada) iyo qalabka wax lagu baaro ee raadiyaha hore ayaa markii ugu horreysay la soo bandhigay qiyaastii 1907. SiC waxaa loo adeegsadaa aaladaha elektaroonigga ah ee ku shaqeeya heer-kul sare ama heer-sare, ama labadaba. Kiristaalo waaweyn oo keli ah oo loo yaqaan 'silicon carbide' ayaa lagu kori karaa habka 'Lely'; iyaga waa loo goyn karaa gemyada loo yaqaan moissanite synthetic. Carbide Silicon oo leh dusha sare waxaa laga soo saari karaa SiO2 oo ku jira walxaha dhirta.
(1) Foornada weyn ee dhalaalaysa, waqtiga dhalaalka dheer, waxay u horseedaa crystallization badan, crystals ka weyn, daahirsanaanta sare iyo wasakhda yar ee soo saarista carbide Silicon.
(2) Astaamaha carbide-ka 'Silicon carbide': adkaansho wanaagsan, nolol dheer.
(3) Kiimikada la maydhay iyo biyaha lagu nadiifiyey nadiif nadiif ah.
(4) Qaaska loo daweeyey carbide-ka 'Silicon carbide' waxaa loo helaa daahirnimo saa'id ah, adkeysi wanaagsan, iyo saameyn fiican oo wax shiid.
Carbide-ka loo yaqaan 'Silicon carbide' waxaa loo isticmaali karaa inuu yahay deoxidizer-ka birta iyo qalabka heerkulka sare u adkaysta dhalaalida.
Carbide-ka loo yaqaan 'Silicon carbide' ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa sida walxaha wax lagu nadiifiyo, oo loo isticmaali karo in lagu sameeyo aalado wax lagu xoqo, sida gawaarida wax lagu shiido, dhagxaanta saliida, madaxa wax lagu shiido iwm.
Carbide-ka silikoonku waa nooc cusub oo ah xoojiye wakiil dejiyeynta biraha sameeya iyo wakiilka kuleylka kuleyliyaha ku habboon. Waxaa loo adeegsadaa deoxidizing. Qiyaasta isticmaalka waa 14kg / t waxay ka dhigi kartaa isticmaalka korantada si loo yareeyo 15-20kw / h iyo waqtiga si loo yareeyo 15-20min halkii foornada si kor loogu qaado heerka wax soo saarka ilaa 8-10%.
Hore: Dib loo cusbooneysiiyey Silicon Carbide budada Micro
Xiga: Sintered Silicon Carbide Micropowder Green
Madow Silicon Carbide Powder Qiimaha Sic Powder
Tube shucaac leh iyo sarriflayaasha kuleylka
Super Fine Powder Silicon Carbide Products
silsilado carbide ah